Rutarium na imewe odida obodo - otu esi eji aka gi mee ubi nkpuru a - Osisi - 2020
Ihe niile banyere rutarium ma ọ bụ otu esi eji aka gị mee ubi site na mkpịsị osisi ochie na mkpọrọgwụ
Ọdịdị na-eme ụfọdụ n'ụdị n'ụdị. Ọtụtụ mgbe, aka na ukwu ma ọ bụ snags a mịrị amị na-eyi ihe ịtụnanya na-enweghị atụ, na-echetara anyị akụkọ ezumike ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị omimi. Nkà nke imepụta ubi nke mgbọrọgwụ - rutaria - sitere na Njirimara nke snags achara, mgbọrọgwụ na stumps. Ọ dị mfe iji aka gị mepụta rutary, ọ zuru ezu iji gosipụta echiche ma gbanye echiche.
Cho na nkwadebe nke ihe
Ọ bụrụ na nnukwu osisi dị n’ubi gị, a na-enwe alaka mgbe niile na ọdịdị na-adọrọ mmasị mgbe ha bechara ya. Ọ bụrụ na enwere nnukwu aka ochie na saịtị ahụ, emela ọsọ ọsọ iji kpochapu ya, aka na-agbanwe agbanwe nke na ọ ga-aghọ nnukwu mkpụrụ n'ubi gị.
Ogwe osisi a mara mma dị n'okporo ụzọ, a na-edozi osisi ahụ ma na-ese ya. Akụkụ ukwu nke ukwu na-enye gị ohere itolite ọtụtụ ụdị ifuru ahịhịa na ahịhịa. A na-akụ ahịhịa dị iche iche n'etiti mgbọrọgwụ. Ogwe osisi a bụ ihe eji achọ mma mma na saịtị ahụ
Rutarium bụ okwu ọhụụ nye anyị, ọ bụ ezie na ndị nwere okike okike ogologo oge na -eme ihe ndị eji achọ mma site na mgbọrọgwụ na stumps. E si n'asụsụ Bekee kpọrọ “root” - mgbọrọgwụ.
Ọ bụrụ na osisi ochie na osisi enweghị ochie na saịtị ahụ, ị ​​nwere ike ịga oke ohia ma ọ bụ kụọ. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ snags mgbe niile, nsị nke stumps, ogbugbo na nnukwu alaka ndị bara uru mgbe ị na-emepụta rutaria. Mgbe ị na-emelite ogige ogige ma ọ bụ n'okporo ụzọ dị n'obodo ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ ezigbo ọkaibe, okpu osisi, na ndekọ osisi.
Mgbe ahọpụtara ihe maka imepụta rutaria, ọ ga-adị mma ma hazie ya. Osisi kpọrọ nkụ abụghị nke ihe ndị na-adịgide adịgide, rutarium achara esighị ike ga-ejigide ike na ọdịdị ogologo oge karịa 6-7. A ga-asacha ihe ndị ahọpụtara, jiri mmiri ọ boilingụinsụ sachapụ ya, ebe ọ dị mkpa - kpochara ya na ájá, ebe ọ dị mkpa - sawn, sonyeere ma ọ bụ bee. Enwere ike imeghe osisi ahụ na varnish, mesoo ya na impregnations pụrụ iche, na-ese. Ma ọ bụrụ na afọ ojuju maka ọrụ ọrụ afọ asaa, o zuru ezu iji hichaa osisi ahụ site na ụmụ ahụhụ na ájá ma hapụ ya n'ụdị okike.
Iwu maka ịmepụta ezigbo ihe mejupụtara
A na-emepụta Rutarias taa ma n'ụlọ (mini-rutarii) na ụlọ ezumike. Rutaria n'ime ubi ga-agbanwe nkuku gị maka izu ike, na-eme ka ọ bụrụ ihe omimi ma nwee ahụ iru ala, ọ ga-aga nke ọma na ụdị ọ bụla ị họọrọ maka ubi gị. Iji mee ka ogige gbanye nke ọma, ịkwesịrị iburu n'uche ụfọdụ iwu ma mara ihe:
Chee echiche ihe ichoro imeputa. Rutarium nwere ike ịbụ naanị akụkụ akụkụ nwụrụ anwụ; ọ naghị adị oke ụtọ, kama ọ bụ ihe omimi. Ọ bụrụ na ijiri ngwakọta nke snags, stumps na okooko osisi na ahịhịa dị ọhụrụ, ị nwere ike ịmepụta ihe ndị mara mma n'anya. Mgbe ụfọdụ, nkụ ọ na-eche na-echetara ụfọdụ anụmanụ ma ọ bụ goblin nke na ọ gaghị ekwe omume ịkwụsịcha ihe oyiyi a.
Ihe bara uru nke rutaria bu na ha nile di iche. Ọ gaghị ekwe omume ịmepụta ogige ndị yiri ya site na snags, n'ihi ọ nweghị ụdị snags na stumps yiri ya.
Nwere ike ịmepụta rutarium ebe ọ bụla - dịka ọmụmaatụ, na nsu ma ọ bụ na veranda.
You nwere ike ịmepụta osisi rutarium naanị iji osisi dịka ihe ahụ, mana ị nwere ike iji ceramik, ihe ndị na-emebi ihe, ihe ndozi nke ubi n'ụdị ọnụ ọgụgụ dị iche iche, obere okwute, okwute na okwute okike. Osisi kpọrọ nkụ na akpaetu na-agwakọta nke ọma.
Enwere ike ịchọta nkọwa ndị ọzọ na vidiyo:
Mainzọ atọ bụ isi nke rutaria
Eke. N'ime usoro a, a na-eji ahịhịa dị ndụ ma na-adịghị ndụ. Nke a bụ nhọrọ kachasị mma na Organic nke ọtụtụ na-ahọrọ.
Dị mfe. A na-eji naanị snags na stumps ebe a, mana ị ka kwesịrị ịrụ ọrụ na ha. Dịka ọmụmaatụ, ịchọtara snag, nke bụ ihe na-echetara oke ohia, mana maka myirịta dị ukwuu ịchọrọ ịkpụ ma debe ya n'ebe ụfọdụ, usoro a yiri ịmepụta ihe ọkpụkpụ.
Ihe eji achọ mma. Na rutarias nke ụdị a, a na-eji ma osisi dị ndụ na ihe eji osisi eme, mana nke ikpeazụ na-arụ ọrụ bụ isi. Dịka ọmụmaatụ, ihe a ga-elekwasị anya ga-abụ mkpịsị aka ma ọ bụ nkụ ga-adị n'ụdị dị egwu, nke ahịhịa dị ala gbara ya gburugburu, nke ọ ga-eleba anya karịa. Ma ọ bụ ọ ga-abụ ihe mejupụtara ọnụ ọgụgụ dị iche iche na ndabere nke ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ, ivy twined with avy, wdg.
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke nhọrọ atọ niile.
Enwere ike ịtụle ụdị rutaria a bụ ihe dị mma, mana a na-ele osisi ahụ anya n'ụzọ pụrụ iche - a na-ekwusi okwu ike, a na-ese osisi ahụ, ya mere, nhọrọ a bụ ihe eji achọ mma.
Mana nhọrọ a fọrọ nke nta ka ọ ghara imetụta, dị ka ebumpụta ụwa si kee ya. Maka ndozi, onye ode akwụkwọ kpebiri ịkụnye okooko osisi na etiti nke mejupụtara
Ihe atụ nke ịchọ mma rutaria. Ngwakọta dị ụtọ, n'etiti nke osisi dị iche iche gbara gburugburu
A ga-eme ya ụdị mgbatị a n’ebe a na-atụrụ ndụ ma ọ bụ n’ebe a na-egwu egwuregwu. Mgbe ị na -emepụta, a na-eji ihe ndozi nke ahịhịa dị ka ụdị nke osisi gnome, osisi gbọmgbọm, nkume, aka na ukwu dị n'okirikiri.
O lee ebe kacha mma maka isi ihe?
Anyị na-enye ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site na:
Na n'ọnụ ụzọ ụlọ. Ngwakọta mara mma nke mara mma ga-enwe mmetụta dị mma, ebe a na-agbakọta ahịhịa na mgbọrọgwụ n'ọnụ ụzọ saịtị gị.
Na nso ntụrụndụ. Na obere ọdọ mmiri ma ọ bụ isi iyi, na-esote arbor, ihe mejupụtara nke ogige ahụ site na mgbọrọgwụ nke nwere ndozi nke ogige ga-adị mma - gnomes, agba na-egbuke egbuke, ụmụ anụmanụ na-akpa ọchị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ idozi nkuku dị omimi n'ime ogige ahụ, ị ​​nwere ike itinye nnukwu osisi ma ọ bụ ihe ịchọ mma nke ahịhịa ndụ gbara ya gburugburu na akuku akuku. Nke a nwere ike ịbụ ogwe ochie, si n'etiti ifuru ya na-eto nke ọma.
Sgba ahịhịa rutarium kwesịrị ijikọ ọnụ na saịtị gị na ụdị nke ubi.
N'ebe dị anya nke ubi a, i nwere ike dobe ọnụ ọgụgụ dị ka nnukwu anụ mmiri nke na-ahụ na osisi ahụ. A na-echekwa snag ahụ n'ụdị okike, a na-etinye ube ya ntakịrị, a na-ejikwa okwute mee ihe maka anya
Plahọrọ osisi Dị Mma
Na osisi dị ndụ, ihe mejupụtara ga-adị mma, na-atọkwu ụtọ. Osisi ekwesịghị ịbụ oke ọhịa, nwere okooko osisi ndị dara oké ọnụ, n'ihi na ihe a na-elekwasị anya na ọnụ ọgụgụ ejiri osisi rụọ. Otu n'ime mkpebi ndị ịga nke ọma bụ ịme ihe dịka ite ifuru si na ukwu ma ọ bụ osisi. Ọ dị mfe ma ọ bụrụ na osisi na-eregharị. Okwesiri iwepu isi, hazie osisi ma mejuputa oghere nke uwa. N'ikike a puru iche, fern, vinca ifuru na chamomiles ga-eto ma maa nma. Ahịrị okirikiri, floxes, petunia na Chernobrivtsi bụ ndị na-akọwaghị ya, ha ga-elekwa anya nkwekọrịta na rutaria.
Ferns na ivy na-ahụ ihe dị egwu megide ndabere nke osisi kpọrọ nkụ, na-eme rutarium mara mma. Nwere ike iji iberibe ahịhịa, akpaetu, jikọta ha na nkume. Enwere ike ịgbanwe osisi na rutaria n'echiche gị, nke a bụ ezigbo okike.
N'ime otu ihe mejupụtara, mgbe ụfọdụ okooko osisi na-enwu gbaa dị mma
Ihe atụ nke mara mma goblin mara mma nke nwere anya mmiri megide ndabere nke fern bụ ọmụmaatụ nke rutaria dị mfe. Osisi a ghapuru abatawo obere nhazi, ihe oma di nma maka anya hoputara - ma ihe doziri edozi
Ọ dị ụtọ na ịrụ ọrụ na -emepụta ahịhịa, na iji aka gị rụchaa ọrụ ga-atọ gị ụtọ karịa.